နေပြည်တော်၊ ၁၉.၉.၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် UNHCR ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Johan Cels ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတူရကီသံအမတ်ကြီး H.E Kerem Divanhoglu ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တို့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး UNHCR ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီသံအမတ်ကြီး တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် Tdh-L တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံချက် အသိပေးမိတ်ဆက် ခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး Terre des hommes- Lousanne (Tdh-L)နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံချက် မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ ၁၆-၉-၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား Portland State University မှ Early Intervention Program ၏ Program Coordinator ဖြစ်သူ Associate Professor, Dr. Hollie Hix-Small နှင့် ECI Team အဖွဲ့ဝင်များက ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး၊ မေခလာခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား Portland State University မှ ECI လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူများ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပုသိမ်၊ ၁၄.၉.၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်ဆောင်ရွက်မည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ၎င်းမှမွေးဖွားသော အသက်(၂)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း အစီအစဉ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အား International Committee of The Red Cross (ICRC)အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ၁၀-၉-၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ - International Committee of the Red Cross (ICRC)၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Stephan Sakalian ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အား International Committee of The Red Cross (ICRC)အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
အသက် (၆)လမှ (၃)နှစ်အရွယ် ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်း၌ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက စိတ်ပါဝင်စားသူများတက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ ၁၀-၉-၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ စီစဉ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အသက် (၆)လမှ (၃)နှစ်အရွယ် ကလေးပြုစု သူများအတွက် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအခြေခံ သင်တန်း၌ တက်ရောက်သင်ယူလျက်ရှိသည့် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက သင်တန်းသူများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်း၏ နည်းပြများနှင့် သင်တန်းသူများက လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about အသက် (၆)လမှ (၃)နှစ်အရွယ် ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်း၌ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက စိတ်ပါဝင်စားသူများတက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ၉.၉.၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Karen MacArthur အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။ တွေ့ဆုံရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်ကာလ ပြည့်မြောက်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Karen MacArthur က ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့် အကြံပြုချက်များအား ဆွေးနွေး ပြောကြားရာတွင် လတ်တလောကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများအား မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အနာဂတ်နိုင်ငံနှင့် အနာဂတ် မျိုးဆက်များကောင်းရန် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဘဝ အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေး
တောင်ကြီး၊ ၈.၉.၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးအောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် တောင်ကြီးမြို့ရှိ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများနှင့် မိခင်ဝိုင်းများရှိ ဆရာမများ၊ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးငယ်များ၏ မိဘများ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများနှင့် ယမန်နေ့က တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းရုံးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အနာဂတ်နိုင်ငံနှင့် အနာဂတ် မျိုးဆက်များကောင်းရန် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဘဝ အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူငယ်ရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်းများဆောင်ရွက်
တောင်ကြီး၊ ၇-၉-၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သဘာဝဘေး ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်ရေးရာကော်မတီဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ လူငယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ရုံးခန်းမ၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူငယ်ရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်းများဆောင်ရွက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး Professor Michelle Kamau နှင့် International Organization for Migration (IOM)အဖွဲ့တို့အား အသီးသီးလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ၂.၉.၂၀၁၉ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် Professor Michelle Kamau နှင့် International Organization for Migration (IOM), Mission in Myanmar ၏ Chief of Mission ဖြစ်သူ Mr. Akio Nakayama ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အသီးသီး လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် about ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး Professor Michelle Kamau နှင့် International Organization for Migration (IOM)အဖွဲ့တို့အား အသီးသီးလက်ခံတွေ့ဆုံ